Unkosikazi ugwaze wabulala umyeni wakhe | News24
Unkosikazi ugwaze wabulala umyeni wakhe
AKUKACACI ukuthi ngabe yini eholele ekutheni owesifazane osemncane wasendaweni yaKwaMpumuza agwaze abulale umyeni wakhe.
Lesi sigameko esishiye abantu abaningi beshaqekile senzeke ngoMsombuluko ebusuku mhla zili-16 kuNtulikazi (July) nalapho kugwazwe kwabulawa khona uMnuz Sbu Sithole, egwazwa ngunkosikazi wakhe.
Ngokuthola kwephephandaba i-Echo uMnuz Sithole kuthiwa ubehlala nonkosikazi wakhe kanye nezingane zakubo kaMnuz Sithole nokubikwa ukuthi bezikhona ngesikhathi kwenzeka lesi sigameko.
Umthombo othembekile osondelene nalesi sigameko, odonse ngendlebe intatheli yaleli phephandaba ukuba kungadalulwa igama lawo, uthe ngesikhathi kwenzeka lesi sigameko izingane zakubo kaMnuz Sithole bezikhona endlini kodwa zizivalele kwelinye lamagumbi nathe usola ukuthi yingoba bezesaba.
“Ngemuva kokuba senzekile isigameko unkosikazi kaSbu ube esebona ukuthi useyashona waphuthuma wabiza ubaba wasendaweni ukuba azomusiza.
“Bazamile ukumthatha uSbu bamuphuthumise esibhedlela kodwa washonela endleleni engakafiki esibhedlela.
“Sisashaqekile nje ngalesi sigameko ngoba akukho ngisho umakhelwane othi uzwile ukuhilizisana kwengxabano nobekungase kuholele ekutheni unkosikazi aze agwaze umkhwenyana wakhe.
Okusiphatha kabi kakhulu yilezi zingane ezincane ezingakafiki ngisho naseminyakeni eyi-16 ubudala ebezikhona ngesikhathi kwenzeka sonke lesi sigameko. Nakuba bengabonanga kwenzeka kodwa umsindo kanye negazi kuyohleli kubahlukumeza njalo.
“Zisezincane kabi lezi zingane ukuthi zibone into ebuhlungu kangaka,” kuphetha yena.
Omunye umthombo uveze ukuthi uMnuz Sithole nonkosikazi wakhe bebengakaqedi isikhathi eside beshadile.
Uthe kulo nyaka uMnuz Sithole ubesanda kuhambisa umembeso kubo kankosikazi wakhe.
Uthe: “Kuhle kona ukukhuluma iqiniso, besazi ukuthi unkosikazi uyamuhlukumeza uMnuz Sithole kodwa besingakaze sicabange ukuthi usengaze amubulale.
“Akusikhona okokuqala ukuthi amugwaze njengoba ayehleli emushaya waze wamushisa nangamanzi abilayo ngaphambi kokuba bashade.
“Sibuhlungu kakhulu ngalento eyenzekile ngoba uMnuz Sithole ubengumuntu ozilungele akekho ongamazi lapha endaweni.”
Ngesikhathi iphephandaba i-Echo lihambele lapho kwenzeke khona isigameko ngoLwesibili lifice amalungu omndeni angazange azidalule amagama kodwa athi ngeke aze akwazi ukuphawula ngalolu daba ngaphambi kokuba kuze kufike wonke amalungu emindeni athintekayo.
Okhulumela amaphoyisa eMgungundlovu uSergeant Mthokozisi Ngobese usiqinisekile isigameko. Uthe kuboshwe owesifazane ngecala lokubulala kanti kulindeleke ukuba avele enkantolo maduze.
Daily Lotto: Winner Winner Chicken Dinner 48 minutes ago Click here for the full list of lottery results